Ulonwabo kwiZiqithi zaseSan Blas - I-Airbnb
Ulonwabo kwiZiqithi zaseSan Blas
Fumana eyona mfihlo yasePanama igcinwe kwiZiqithi zeSan Blas, iseti yeziqithi zeCaribbean ezingama-365 kangangeentsuku ezingama-365 zelanga. IZiqithi ziphethwe ngabemi bethu basePanamani "IiGunas" abaya kuthanda kakhulu ukukwamkela kwaye babelane ngenkcubeko yabo. Wonwabele amanzi ethu acwengileyo, ukukhanya kwelanga okuhle, isanti emhlophe kwaye uvuke kusasa uve amaza oLwandle kwaye ubone indawo entle ekwigumbi lakho. IParadesi efihlwe kakuhle ikulindile kolu hambo ungalibalekiyo oluya kukunika iinkumbulo ubomi bakho bonke
Kwimeko apho iintsuku zakho zingafumaneki kwikhalenda yale ndlu ngeentsuku ofuna ukuhlala ngazo, nceda ujonge ezinye izindlu zamaplanga ezifanayo apha: www.airbnb.com/rooms/188 Atlan98? s = 51 okanye nceda undithumelele umyalezo.
I-Narasgandub Dummad ngolwimi lomthonyama ithetha "iBig Orange" ikummandla weGuna Yala owaziwa ngokuba yiSan Blas. LeParadesi Emhlabeni yenza kube mnandi ukuphila kwiCaribbean. Ngomoya wethu ococekileyo, amanzi acwengileyo nafudumeleyo Isiqithi sethu sinento yonke oyifunayo: ulwandle olunentlabathi emhlophe, imithi yesundu enamanzi eecoconut, indawo eninzi yokuphumla, ii-hammock, ubomi obumangalisayo baselwandle kunye neekorali. Ngoko lungela izixhobo zakho zokuntywila. Siye siqeshe nezixhobo zokuntywila, nangona kunjalo ziyafumaneka.
Iphakheji yethu iquka:
• Ukutya okumnandi okuyi-3 ngosuku
-Isidlo Sakusasa -Isidlo Sakusasa (siya kuba kukubanjwa kwemini) Abantu basekuhlaleni badla ngokuyenza loo nto bayifumene ngemini kwaye imenyu isekelwe ngokukhethekileyo kwirayisi, i-coconut, i-pltain, iimbotyi, imifuno kunye nokutya kwaselwandle okufreshi kuquka intlanzi, i- langouste/ i-lobster, i-shrimps, ii-shrimps ezinkulu, i-octopus kunye nabanye.
•Siza kukunika indlu yamaplanga yabucala eneebhedi. Zitofotofo kwaye zicoceke kakhulu emini (Izindlu zamaplanga zenziwa ngabantu basekuhlaleni "kwiNqugwala" elisisiseko kwaye zinika amava akhethekileyo okuphila ubomi njengoko abantu basekuhlaleni besenza oko ngosuku) Sinokulungiselela iibhedi ezingakumbi kwindlu yamaplanga enye njengoko kucelwa kwaye sinokulungiselela elinye igumbi labucala (xa ifumaneka) njengoko sinezindlu zamaplanga eziyi-7 zangasese kwesi siqithi.
• Isiqithi sethu sesinye sezona zimbalwa ezinamanzi acocekileyo nacocekileyo okuhlamba, sinamagumbi okuhlambela ayi-2 anezindlu zangasese neeshawa.
• Isiqithi sethu sinejenereyitha yombane esetyenziswa emva ko-6 ebusuku ukuze kukhanye ebusuku uze ubhatalise ii-laptop zakho, iikhamera kunye nezixhobo eziphathekayo.
Esi siqithi siza kuba sesakho wedwa kunye neendwendwe, kuza kubakho iqela le-Gunas (abantu basekuhlaleni) eliza kubakho ukuze likuncede xa kuyimfuneko ngalo lonke ixesha.
Kukho iziqithi ezininzi onokuzityelela, sazise ukuba unqwenela ukutyelela ezinye iziqithi imini yonke, singakulungiselela oku. Esi siqithi siza kuba sesakho wedwa kunye neendwendwe, kuza kubakho iqela le-Gunas (abantu basekuhlaleni) eliza kubakho ukuze likuncede xa kuyimfuneko ngalo lonke ixesha.
Siya kukuvuyela kakhulu ukusebenzisana nawe kwaye sikuncede kuyo nantoni na oyifunayo. Kuba iqela eliza kukusebenzela kwiSiqithi lithetha kuphela isiGuna kunye neSpanish kunokubakho umqobo omncinci wolwimi njengoko bengathethi isingesi, isiNgesi sabo siya kuba sisiseko, nangona kunjalo siya kuphuma kwindlela yethu ukuhlangabezana nolindelo lwakho. (Sithetha ulwimi oluqhelekileyo)
Nceda ungathandabuzi ukubuza nayiphi na imibuzo phambi kokuba uye eSiqithi ukuze iqela lethu labathetha isingesi lihlale likunceda phambi kohambo lwakho.
Siya kukuvuyela kakhulu ukusebenzisana nawe kwaye sikuncede kuyo nantoni na oyifunayo. Kuba iqela eliza kukusebenzela kwiSiqithi lithetha kuphela isiGuna kunye neSpanish kunokubakh…